एमालेको १० बुँदे सहमति,अब के हुन्छ ?
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले बुधबार बालकोटस्थित आफ्नै निवासबाट घोषणा गरे, ‘माधव नेपालजस्ता लाजसरम हराएका मान्छेका पछाडि लाग्ने केही व्यक्तिहरू अब सच्चिएर पार्टीमा काम गर्न चाहन्नुहुन्छ भने काम गर्न दिन्छौँ ।तर, माधव नेपालको हकमा आत्मालोचना, गल्ती कमजोरी स्वीकारे पनि पार्टीमा कुनै ठाउँ छैन ।….माधव नेपालजस्ता गद्दारलाई क्षमा गर्न सकिन्न ।’
प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिँदै गर्दा ओलीले मंगलबार सिंहदरबारबाट गरेको सम्वोधनमा पनि माधव नेपाल पक्षले आपराधिककार्यगरेको बताएका थिए ।
गत असार २७ गते मध्यरातमासिंहदरबारबाट एमाले कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सहमति पत्रको पहिलो बुँदामै यस्तो लेखिएको छ,‘विगत केही समययता पार्टीभित्र देखापरेका आन्तरिक अन्तरविरोधहरु पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटूतापूर्ण तथा एक अर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तरविरोधहरुलाई पार्टीभित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौं ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भइसकेको छ । अब अध्यक्ष ओलीको यस्तो अभिव्यक्ति आएसँगैएमालेको बैठकले १० बुँदे सहमति अनुमोदन गर्ने सम्भावना क्षीण बनेको छ ।
नेकपा एमालेमा अब १० बुँदे सहमति पत्रको भविश्य के होला ? यसबारे सर्वप्रथम राजनीतिक विश्लेषक एवं राजनीतिशास्त्रमा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलका कुरा सुनौं–
माधव नेपालका पक्षबाट अस्ति पाँच दलीय गठबन्धनमा बसेर उहाँले अब यो १० बुँदे भयो, म त्यतातिर लाग्छु, एमालेलाई पनि साथ लिएर अगाडि जानुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो गम्भीरता देखाउनुभयो । तर, ओलीजीको उद्देश्य त अदालतलाई प्रभावित बनाउने मात्रै थियो, त्यहाँ भन्दा परतिर छँदै थिएन । त्यो उद्देश्यमा १० बुँदे पराजित भयो । असान्दर्भिक भयो ।
माधव नेपालको तीनबुँदे असन्तुष्टि : अदालतलाई प्रभावित पार्ने सहमति च्यातिन्छ
मलाई लाग्छ अब केपी ओलीजी १० बुँदेमा प्रतिवद्ध हुनुहोला भन्ने देखिँदैन । किनभने, उहाँमा आफ्नो पद गुम्ने कारणचाहिँ माधव नेपालहरू नै हुन् भन्ने रिस छ ।एक हिसाबले यो हो पनि । किनभने, देउवाजीको बहुमत पुगेकै २३ जनाको हस्ताक्षरले हो । यसले गर्दा आफ्नो भाग खोसिएपछि उहाँलाई रिस उठ्नु स्वाभाविकै हो ।
अब मलाई के लाग्छ भने माधव नेपाल पक्षले यसलाई कसरी बोकेर हिँड्नुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसलाई प्याचअप गर्नका लागि उनीहरु ओलीका सामु गरुणका अगाडिका सर्पजस्तै हुन्, तिनको केही हैसियत देखिँदैन ।
मेरो विचारमा माधव नेपालको मिसन पनि अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । संसदलाई असमयमै भंग गरिएकोमा शुरु भएको हो यो मिसन । संसद विघटन अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भयो भनेर त्यसलाई पुनःस्थापित गर्नका लागि यो मिसन शुरु भएको हो । पुनस्र्थापित संसदको यो मिसन माधव नेपालको पनि पूरा भएको छैन ।
माधव नेपालको मिसन कहाँदेखि पूरा हुन्छ भने जतिखेर यो सरकारले विश्वासको मत पाउँछ । त्यसपछिमात्रै यो संसद टिक्ने हो । यसले गर्दा जहिलेसम्म यो सरकारले विश्वासको मत पाउँदैन, त्यो विन्दुसम्म माधव नेपालको मिसन अधुरै रहन्छ ।
तर, माधव नेपालले १० बुँदेप्रतिको दायित्वबाट पछि हटेको छैन भनेर गठबन्धनको बैठकमा म्यासेज दिनुभयो । तर, केपी ओलीले चाहिँ त्यो १० बुँदे सहमति अब गयो भन्ने म्यासेज दिए ।
अहिले एमालेमा मुलुकभरि नै समानान्तररुपमा संगठनहरु बनेका छन् । यो त्यसै आएको होइन । वास्तवमा छोटे ओलीहरु सबैतिर छन् । केन्द्रमा ओलीले जे गरे, त्यही सिकेर जिल्लामा छोटे ओलीहरुले माधव नेपाल पक्षलाई खेदेका छन् । नयाँ उत्साह र नयाँ उत्साहका साथ समानान्तर कमिटीहरु बनाइरहेका छन् । यसले गर्दा एमालेभित्रको विवाद कायमै रहने देखिन्छ । किनभने, एमालेभित्र स्पेस पाइएन भने के गर्ने त माधव नेपालले ? कित वनबास जानुपर्यो, कि त छोड्नुपर्यो । उनले एमाले छोड्ने त पक्कै होइन ।
अब एमालेमा ओलीको राजनीतिक सान्दर्भिकता सकियो । किनभने, उनले इतिहासमा त्यत्रो मौका माएका थिए, त्यो थाप्न सकेनन् । त्यो विजयले उनमा मैमत्तापन यति लिएर आयो कि उनले कसैलाई गन्नै छाडे । यसले गर्दाखेरि अब उनै ओलीलाई बोकेर हिँडेर कहाँ पुग्छ त एमाले ?किनभने ओली वैचारिक हिसाबले पनि वामपन्थ भन्दा रामपन्थतिर लागिसकेका छन् । यसले गर्दा अब यो अवस्थामा एमालेलाई बचाउने हो भने युवाहरुले आँट गर्नुपर्यो र उनलाई विदा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । किनभने, अब ओलीलाई बोकेर एमाले कहीँ पनि पुग्दैन ।